Diplura သို့မဟုတ် earwig - မကြာခဏသူတို့ရဲ့ Stinger သုံးပြီးလူတစ်ဦးကိုတိုက်ခိုက်ကြောင်းတော်တော်စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောအင်းဆက်ပိုးမွှား။ ပြီးတာနဲ့ကိုက်နာကျင်ခြင်းနှင့်နီခြင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဥယျာဉ်တော်၌သူတို့အသီးအပင်အရွက်များနှင့်ပန်းပွင့်အစာစားခြင်း, စိုက်ပျိုးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဥယျာဉ်တော်၌ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ dvuhvostok ရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Diplura သင်ချက်ချင်းသူတို့ကိုသတိပြုမိမပြုစေခြင်းငှါဒါအဓိကအား nocturnal ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာ damp သောအရပ်တို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်စက်ရုံအပျက်အစီးများ၏အဟောင်းနှင့်ပုပ်လိပ်ခေါင်းအခြေချ။ သူတို့ရဲ့နံပါတ်များကိုဥယျာဉ်တော်၌အသေးများမှာနေစဉ်, သူတို့ပင်သည်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောအင်းဆက်ပိုးမွှားအစာစားခြင်းအားဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့သိသိသာသာလူဦးရေနှင့်အတူယဉ်ကျေးမှုအစိုက်ခင်းမှ irreparable ထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းမှာ, ဥယျာဉ်တော်၌ dvuhvostok ဖယ်ရှားပစ်ရပုံကိုသိရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်တို့ရှိသမျှသည်မြက်ပင်မီးခိုးပုပ်အရွက်, ပုပ်သစ်သား, etc ကျော်လွန်ထွက်တာ, ပုံမှန်ဧရိယာရှင်းလင်းဖို့လိုအပ် တိုင်းဆောင်းဦးရာသီကြောင့်နက်ရှိုင်းစွာမြေဆီလွှာကိုတူးဖို့လိုအပ်သောဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုဖယ်ရှားဖျက်ဆီးဖို့ dvuhvostok ကို detect အခါ။
ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အယဉ်ကျေးမှုကြက်သွန်နီသို့မဟုတ်ကြက်သွန်ဖြူအဖြေတစ်ခုနှင့်အတူအပင်ပက်ဖြန်းတားဆီးမည်မဟုတ်။ စိုစွတ်သောသတင်းစာများနှင့်စုတ်, အမှောင်စတော့အိတ်တစ်ဦး site ပေါ်တွင်ထွက်ချထားသူတို့ကိုဖမ်းမိခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းကိုပိုပြီးကျယ်ပြန့်အောင်အဲဒီအင်းဆက်ပိုးမွှားတွေအများကြီးအနီးကိုစုသိမ်း: dvuhvostok ဖယ်ရှားပစ်ရရန်မည်သို့မသိရပါဘူးသောသူတို့အဘို့ A ကောင်းဆုံးနှင့်သက်သေပြရိုးရာဆေးတစ်လက်ထောင်ချောက်များနေရာချထားသည်။
ဖန်လုံအိမ်အတွင်းရှိဖယ်ရှားပစ်ဖို့ dvuhvostok ရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဖန်လုံအိမ်သည်မြေဆီလွှာကိုကုသရာတွင် earwigs ဖယ်ရှားပစ်ရသည် Periodic ဓာတုအမျိုးအစား "Fosbetsida" အေးဂျင့်သို့မဟုတ် "Karbofoma" အကြံပြုသည်။
နှံ့နှံ့စပ်စပ်ကို manual ဖမ်းအင်းဆက်ပိုးမွှားထောင်ချောက်တွေ့ရှိနေရသည်နှင့်စုစည်းကြက်သွန်သို့မဟုတ်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူအတူအပင်ပက်ဖြန်းနှင့်မြေကိုတူး - တစ်ဖန်လုံအိမ်နေဆဲပွင့်လင်းဒေသများရှိကဲ့သို့တူညီသောအကွံဉာဏျလျှောက်ထားလည်းရှိပါတယ်။
အိမ်ထဲ dvuhvostok ဖယ်ရှားပစ်ရဘယ်လိုနေသလဲ?
ကံမကောင်းစွာပဲ earwigs ဥယျာဉ်ကိုကန့်သတ်ထားကြသည်မဟုတ် မြေယာနှင့် ဖန်လုံအိမ် နှင့်မကြာခဏလူနေအိမ်နေအိမ်များနှင့်ပင်တိုက်ခန်းများကိုထိုးဖောက်။ ဒါဟာနီးကပ်ခဲသာယာသောဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, လူတွေကသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရအားလုံးကိုနည်းလမ်းကြိုးစားနေကြပါတယ်။
အပြောင်းအလဲနဲ့ baseboards, တင်း, ပိုးဟပ်၏ရေတိမ်ပိုင်းအိမ်တံခါး;
dichlorvos နှင့်၎င်း၏ analog ၏အိမျ၌ပက်ဖြန်း;
Platikodon - ဥယျာဉ်ခေါင်းလောင်းများအတွက်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့
စပါးစိုက်ပျိုးချိန်စတော်ဘယ်ရီ - ကြွယ်ဝစပါးရိတ်ရာကာလ၏အခြေခံအုတ်မြစ်
Gerber - အိမ်မှာစောင့်ရှောက်မှု
Swarovski ပုတီး - Swarovski crystals နှင့်အတူလှပသောပုတီး၏ဓါတ်ပုံများ၏စုဆောင်းမှု
စိတ်ကူးများ Corporate လက်ဆောင်များ
မင်္ဂလာဆောင်အကွင်း - ဖက်ရှင် 2015
Panthenol ဆံပင် - ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပဆံပင်ကောက်ကောက်အဘို့အတစ်လောကလုံးဆေးတစ်လက်၏အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ပျက်ဆီး
Blueberries - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
လျှပ်စစ် pancake ထုတ်လုပ်တဲ့
Charlize Theron vin ဒီဇယ်၏လက်ရုံးထဲမှာ "Fast & Furious 8" ၏ Premiere မှာထငျရှားလေ
ရိတ်သိမ်းပြီးနောက် Currant Pruning
Lilac စားဆင်ယင် - လှပသောဆင်မြန်းနူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင့်တောက်ပသောအရောင်အဆင်း
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့် 13 နှစ်အထိမ်းအမှတ်မဟုတ်နိုင်သလဲ
18 ငါး, ဂုဏ်အသရေရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ